samsung galaxy s21 ultra vs iphone 12 pro max
Kuru Nhau & Ongororo Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max
Iyo Galaxy S21 Ultra uye iyo iPhone 12 Pro Max ndiyo mafoni maviri akanakisa uye akazara-maficha anogadzirwa ne Samsung neApple. Idzi ndidzo nhare uko makambani maviri atora zvese zvadzimira: ane akanakisa uye anopenya masikirini anowanikwa, epamberi kamera masystem, anomhanyisa processor, uye makuru mabhatiri.
Sechipfupiso chipfupi, pakati pavo, iyo Galaxy ndiyo ine kamera inochinja-chinja ine malenzi maviri ekuswededza pa3X zoom uye 10X zoom, zvichienzaniswa neiyo imwe chete 2.5X zoom kamera pane iyo iPhone, saka iwe unowana yakachena yakawanda zoom mifananidzo uye mavhidhiyo pazviri. Iyo Galaxy zvakare ine 120Hz yekukurumidza zororo reti skrini yekutsvedza kutsikisa iyo iyo iPhone isipo. Uyezve, inomhanyawo paApple, inova yakavhurika ecosystem iyo inobvumidza iwe kugadzirisa yako foni chero chaunoda, uye iwe une chigunwe chigunwe scanner pachinzvimbo chekuona kumeso, iyo inouya inobatsira kune aya masiki ekupfeka nguva.
Iyo iPhone ichiri kushomeka padiki pane inotonhorera maficha uye kamera zoom tricks, inomhanya yakavimbika kwazvo uye inozivikanwa yeIOS, uye ine inokurumidza processor iyo inorova iyo Galaxy mumabhenji uye inowedzera mune ramangwana-chiratidzo. Iyo iOS software inonzwawo yakanyanya kunatswa uye nekunaka, Apple emoji inotaridzika zvakanyanya, iwe une iMessage, uye Apple ichaendesa software inogadziridza kweanenge makore mashanu, nepo iyo Galaxy ichingowana chete makore matatu ekugadziriswa kwesoftware, uye ivo vachasvika ne kunonoka kukuru.
Ehezve, iwe unodawo iPhone kana iwe uchida kushandisa yakakurumbira Apple Watch, uye iyo iPhone inokodzera mushe mushe muApple ecosystem ine maficha akaita seAirDrop yekumhanyisa isina waya yekugovana, AirPlay kune vakangwara maspika, uyezve gadget senge AirPods uye AirTags, uye nezvimwe zvakawanda zvakanakisa zvishongedzo.
Asi izvo & maapos anongobata pamusoro, regai & apos titore mukati uye tiongorore misiyano muudzame, kuti iwe ugone kuita sarudzo yakanakisa pakati pevaviri.
Samsung Galaxy S21 Ultra $ 49999 $ 119999 Tenga kuSamsung Wona mutengo Tenga kuAmazon $ 19999 $ 119999 Tenga kuVerizon $ 39999 $ 119999 Tenga kuAT&T $ 49999 $ 119999 Tenga paT-Mobile $ 114999 $ 119999 Tenga paGoodBuy
Nekutsanya, 120Hz zororo reti iyo Girazi ine inotsvedza inofamba
Ose maGirazi S21 Ultra uye iPhone 12 Pro Max ane mamwe mahwindo makuru anoburitsa mavara akanaka pasina yakawanda yekudonha kwehunhu kana iwe uchitarisa iyo skrini pakona, uye ese ari maviri anowedzera kupenya kupfuura yako yepakati foni kuti ugone kushandisa zvakanaka ivo vari panze.
Pepa, ndiyo iyo Girazi ine iyo skrini hombe. Musiyano we 0.1 inches, zvisinei, haunyatso kuoneka, uye izvi zviviri zviri pachena kutambanudza miganho yekuti yakakura sei skrini iwe yaunogona kuwana mune isiri-foldable foni.
Kune echiratidziro nerds, heano ekuratidzira mamaki kune yega yega mafoni:
Ratidza saizi 6.8 ', yakakombama 6.7 ', yakati sandarara
Sravana Sameeralu Serial 4th Technology URI URI
Kugadziriswa, kuwanda 1440 x 3200 pixels, 516ppi 1284 x 2778 pixels, 458ppi
Furemu chiyero 10Hz - 120Hz Simba 60Hz
Peak kupenya 1,500 husiku 1,200 husiku
Zvimwe zvinhu HDR rutsigiro HDR rutsigiro
Imwe siginicha iPhone screen element inoramba iri notch, inovhara dzakaomarara Face ID maseru uye pamberi kamera, nepo Galaxy S21 iine yakanyanya discrete punch hole gamba pamberi pekamera isinga & inodzivisa maonero ako. Izvo & apos; zviri nyore kujairira iyo iPhone notch mune zvezuva nezuva, zvekushandisa, asi zvinogona kucherechedzwa kana iwe uchiona mavhidhiyo uye kunyanya kana iwe uchitamba mitambo.
Iyo Galaxy ine yakasarudzika peculiarity: yakatetepa pendi screen ichienzaniswa neiyo yakati sandara pane iyo iPhone. Iyo tapered skrini inoita kuti zvive nyore kutsvaira kufamba uye zvakare zvinobatsira kuwana yakatetepa bezel-tarisa kune imwe futuristic, yese-skrini kutaridzika.
Iyo Samsung ine akati wandei mamwe mabhenefiti futi: iyo skrini ine ine zvishoma kumusoro resolution iyo inoguma mune yakadzama yakajeka. Don & apos; usatarisira kuti iyo iPhone iite sepikisiki nenzira ipi neipi, panzvimbo pezvo tarisira kuona mutsauko mudiki mukufarira iyo Girazi kana ukanyatsotarisisa padhuze. Kunyanya kukosha, iyo skrini iri paGirazi inogona kumhanya pamwero we120Hz yekuzorodza, kaviri nekukasira se60Hz pane iyo iPhone, uye izvi zvinoita kupuruzira zippier uye kutsetseka pane iyo iPhone. Nyowani paGirazi ndeyekuti iyi yekumhanyisa yekuzorodza mwero inogona kushandiswa pazere resolution, uye iyo skrini ichagadzirisa otomatiki iyo yekuzorodza mwero, saka iyo max 120Hz kumhanya ichazongoshandiswa chete pazvinenge zvichidikanwa, nepo iyo yasara yenguva iyo skrini inogona smartly chinja kune yakaderera uye yakawanda simba-inoshanda zororo reti (yakaderera se10Hz).
Uye heino edu ekuyera zviyero zveimwe yeiyi skrini.
Samsung Galaxy Cherechedza 20 Ultra
Iyo CIE 1931 xy color gamut chati inomiririra iyo set (nharaunda) yemavara iyo inoratidzwa inogona kubereka, iine sRGB colorpace (iyo yakaratidzwa katatu) inoshanda sereferenzi. Iyo chati inopawo inomiririra inomiririra yekuratidzira & apos; s kunyatso kurara. Iwo madiki makwere akayambuka miganhu yetriangle ndiwo mareferenzi eaya mavara akasiyana, nepo madiki madiki ari iwo chaiwo matanho. Sezvineiwo, doti rega rinofanira kuve rakamisikidzwa pamusoro penzvimbo yaro. Iyo 'x: CIE31' uye 'y: CIE31' kukosha mutafura pazasi pechati kunoratidza chinzvimbo cheyero imwe neimwe pachati. 'Y' inoratidza kuvhenekera (mumataniti) erudzi rumwe nerumwe rwakayerwa, nepo 'Target Y' iri mwero wekuvhenekera unodikanwa weiyo vara. Pekupedzisira, '2000E 2000' ndiyo Delta E kukosha kwemuvara wakayerwa. Delta E tsika yepazasi pe2 yakanaka.
Iyo Ruvara kururamisa chati inopa zano rekuti padyo sei kuratidzwa & apos; s akayerwa mavara ari kune avo avanonongedza iwo maitiro. Mutsara wekutanga unobata akayerwa (chaiwo) mavara, nepo mutsetse wechipiri wakabata referensi (chinangwa) mavara. Iyo yepedyo iyo chaiyo mavara ari kune akananga iwo, zvirinani.
Iyo yega runyararo rudiki iyo iPhone inopa ndeye kutsetseka kwekubata kudavirira kweIOS iyo isinga & svetuke iyo skrini tad kana iwe ukaisa kana kusimudza kubva pamunwe wako.
Mune ese akakosha ekuratidzira mhando zvinhu, zvisinei, Samsung ine inotungamira uye kana iwe uchinyatsosarudza nezve yako skrini, iyo Galaxy ndiyo iri nani.
Uyezve, iyo S21 Ultra inowedzera digitizer yeS S rutsigiro, yakawedzera kuwanda.
Ona iyo yakazara Samsung Galaxy S21 Ultra vs Apple iPhone 12 Pro Max saizi yekuenzanisa kana kuenzanisa ivo kune mamwe mafoni vachishandisa yedu Saizi Kuenzanisa chishandiso.
Iyo Galaxy S21 Ultra inouya yakashongedzwa neazvino uye yakasimba kwazvo Qualcomm Snapdragon 888 chip muUnited States, nepo mamodheru epasirese achatumira neyakagadzirwa Samsung-yakagadzirwa Exynos 2100 processor, iyo gore rino inotarisirwa kuti pakupedzisira iwirirane neSpapdragon mukushanda pamwe nesimba. kunyatsoshanda. Kune rimwe divi, iyo iPhone 12 Pro Max inoshandisa iyo Apple A14 Bionic chip.
Vaviri vagadziri vanoshandisa tekinoroji yepamusoro-soro inowanika kune ma processor aya: 5nm yekugadzira, saka hapana mutsauko pane iwo mugumo. Zvakadaro, Apple & apos; s A14 chip ine mukana unoonekera mune ese ega-epakati uye akawanda-epamoyo maitiro.
Geekbench 5 imwechete-musimbotiYakakwirira iri nani Samsung Galaxy S21 Ultra 1081 Apple iPhone 12 Pro Max 1601
Geekbench 5 yakawanda-musimbotiYakakwirira iri nani Samsung Galaxy S21 Ultra 3463 Apple iPhone 12 Pro Max 4228
GFXBench Mota Dzingirira pa-screenYakakwirira iri nani Samsung Galaxy S21 Ultra 52 Apple iPhone 12 Pro Max 54
Sezvineiwo, iyo giraidhi inoshanda pane ese machipisi yakafanana. MuGFXBench Car Chase pa-screen bvunzo yatakaita pasarudzo ye1080p, vese vakahwina zvakada kufanana.
Panyaya yekuchengetedza, iyo yepasi Galaxy S21 Ultra modhi inotanga pa128GB yeye-bhodhi ndangariro, inoenderana neyakachengetwa inopihwa pa iPhone 12 Pro Max. Iyo Galaxy S21 iri kusvetukawo iyo microSD kadhi slot kekutanga pane iyo Galaxy mureza, saka ikozvino zvakangofanana neiyo iPhone, HAPANA nzira yekuwedzera iyo yekuchengetera ... kunze kwekunge iwe uchitenga pricier vhezheni ine yakawanda yekuchengetedza kubva kune iyo -ku.
Ehezve, mafoni ese ari maviri anowanikwa pane ese makuru anotakura pasi rese uye muUnited States, uye ivo vanotsigira kuunganidzwa kwe5G nemapoka ese anodikanwa. MuUS, ese ari maviri anotsigira iyo sub-6GHz uye mmWave mhando dze5G.
Yakasimbiswa Performance mumitambo
Uyu muedzo uchave unonyanya kufarira kune vatambi. Nepo mabhenji mazhinji achingomhanya kwemaminetsi mashoma, iyo 3D Mark Wildlife bhenji yekutenderera kwemaminetsi makumi maviri, iyo inobvumidza vashandisi kuti vaone kana machipisi ari mukati memafoni achamonereka mushure mechinguva, hunhu hwausingabate nemamwe mabhenji . Chokwadi, isu tinoona kuti iyo Exynos 2100 chip iri mukati meS21 Ultra inoputika munzira hombe kutenderera iyo 15th miniti yemuyedzo, ichirasikirwa zvakapoteredza 30% yekutanga kwayo kuita. Kwete izvozvo chete, tembiricha inokura kusvika kune inopisa chaizvo 42 ° C.
Panguva imwecheteyo, iyo iPhone 12 Pro Max ine kuputika kukuru mukuita mune yekutanga bvunzo, uye nekukurumidza masikero kumashure neakakomberedza 25%, kutenderera iyo 3rd miniti yemuyedzo, uye kubva ipapo ichienda pane iyo yakadzikama. kumhanya.
Uye uchingotarisa furemu reyimendi yebenchmark kusvika kumagumo kweyedzo, iyo iPhone inomhanya yakatsiga 30+ fps, nepo iyo Galaxy iri pakati zvishoma kupfuura 20fps, saka ndiwo mutsauko wakakura mukufarira iyo iPhone.
Maviri telephoto zoom kamera pane iyo Girazi inogona kuiita iyo inonyanya kuita zoom kamera, asi chete iyo iPhone ine LiDAR sensor yeAR
Iyo Galaxy S21 Ultra inounza chimiro nyowani kuchikamu chekamera icho zvino chinoenderana nerutivi rwefoni, nepo iyo iPhone ichiratidzira iyo inozivikanwa chitofu pamusoro sekugadzirwa kwemakamera. Ose ari maviri akasarudzika uye ari nyore kuoneka, asi zvakare ese ari maviri akasimudza mabhedhi emakamera, saka mafoni ese ari maviri anozununguka kana iwe ukaaisa pasi patafura pasina kesi.
Kunze kwekusiyana kwekushongedza, kune mamwe misiyano mikuru muhuwandu uye zvirevo zvemakamera.
Iyo Galaxy ine yekumusoro ruoko nemaviri telephoto kamera, nepo iyo iPhone iine imwechete zoom kamera.
PaGirazi, iwe unowana periscope lens, ine yakareba-renji, 10X zoom kugona, uyezve, iwe zvakare une yechipiri zoom zoom kamera, iyi iri pfupi-renji 3X zoom lens. Yakasanganiswa pamwe chete, aya maviri makamera anoita kuti Galaxy iri pachena foni yepamusoro kana uchifanira kuwana mufananidzo wakajeka wechimwe chinhu chiri kure.
Heano akajekeswa kamera specs:
Main Kamera 108MP, 24mm f / 1.8 lens ine OIS 12MP, 26mm f / 1.7 kamera ine sensor yekuchinja kugadzikana
Secondary Camera 12MP Ultra-yakafara, 13mm 12MP Ultra-yakafara, 13mm
Chechitatu Kamera 10MP, 3X zoom telephoto lens (72mm, f / 2.4) ine OIS 12MP, 2.5X zoom telephoto lens (65mm) ine OIS
Yechina Kamera 10MP, 10X zoom periscope lens (240mm, f / 4.9) ine OIS -
Kuwedzera sensors Laser otomatiki kutarisa dhizaina yekubata
Cherekedza kuti iyo Galaxy ine yakafararira main kamera. Iyo inoshandisa 24mm lens maringe ne 26mm lens pane iyo iPhone (uye mazhinji mamwe mafoni enyaya iyoyo). Izvi zvinogona kunge zvisingaite kunge musiyano wakakura, asi zvinokonzeresa kuona kwakakura.
< S21 Ultra iPhone 12 Pro Max> * Cherekedza iyo iPhone ine yakachena yakadzama kutenderedza helm yechikepe, asi iyo Galaxy ine yakakura nzvimbo yekuona
Chinhu chinoyemurika cheiyo Galaxy chinofanirwa kuve kugona kwayo kwekusvitsa, saka regai maapos aone kuti anoenzanisa sei neiyo iPhone:
< S21 Ultra iPhone 12 Pro Max>
Ndiyo chaiyo nyika yemusiyano, iyo Galaxy inonakidza zvechokwadi pano. Tevere kumusoro, regai maapos atarise dambudziko chairo, rakaderera-mwenje mifananidzo! Ramba uchifunga kuti mapikicha pazasi akabatwa achishandisa auto modhi ine Scene Optimizer inogoneswa paGirazi uye isu tashandisa zvakare iyo Auto mode pane iyo iPhone.
Padivi revhidhiyo, iyo S21 Ultra inogona kurekodha vhidhiyo ye8K pa24fps, nepo iyo iPhone 12 Pro Max isingatsigire resolution yakadai uye maxes kunze ku4K. Vhidhiyo ye8K inouya nemipimo mishoma, inonyanya kukosha, inoshaya kudzikama kwevhidhiyo uye zvakapetwa kaviri saizi yakakura yemafaira zvinoreva kuti & apos haisi sarudzo yaunofanira kushandisa zuva nezuva. Nekudaro, kune iwo akakosha, mafirimu nguva aunoda kuita ekupedzisira, it & apos; s chinhu chinogamuchirwa.
Zvese zviri zviviri iyo Galaxy uye iyo iPhone inogona zvakare kunyora HDR mavhidhiyo pa4K kune akapfuma mavara. HDR inomirira yakakwira simba renji uye muvhidhiyo, inonyatso kuita kuti zvikamu zvakajeka zvevhidhiyo zvioneke ... kunyangwe kupenya, uye sezvo ichitora yakawanda yakawanda ruvara, iwe unowana iwo akatsetseka gradients anotaridzika zvirinani. Chaizvoizvo, Galaxy nhare dzakakwanisa kurekodha vhidhiyo yeHDR kubvira iyo Galaxy S10, uye ivo vakavaka pamusoro peiyo yakavhurika HDR10 standard (Samsung inoidaidza kuti HDR10 +). Iwo maPhones azvino uno, zvisinei, anotora mavhidhiyo eHDRR nekukasira, uye izvo & maapos ndiwo mutsauko wakakosha. Apple inoshandisa yepamutemo Dolby Vision HDR yakajairwa, asi pakupera kwezuva, nhau dzakanaka ndedzekuti iwe unogona kutumira kunze vhidhiyo yeHDR kubva kuGirazi neiyo iPhone kuti utaure, YouTube, uye unogona kunakirwa nezvakanaka zveHDR pane ese ari maviri. mafoni.
Kana iwe ukarekodha iyo isiri-HDR vhezheni ye4K, takaona iyo iPhone ichiita zvirinani zvine yakachena tsananguro uye zvakare, mune yakaderera yakanyanya mwenje iyo Galaxy inokundikana kusvina kunze kwakakwana mwenje uye mavhidhiyo pairi anoita seasviba zvakanyanya. Nekudaro, zvingave zvipfupi kuona kungopa iyo iPhone kuhwina nekuti hausi iwo mutambo weiyo Galaxy maererano nekuswededza! Iyo Galaxy inogona kuenda kusvika ku20X zoom muvhidhiyo, asi chii & apos; chakanyanya kukosha ndechekuti mhando yacho ingori inoshamisa uye vhidhiyo rinotaridzika zvinoshamisa kugadzikana uye isina jitter. Kana iri iPhone ... zvakanaka, regai maapos angoti iwe hausi kunyatsoda kuswededza kure zvakadaro paiyo iPhone.
Gudzanzwi uye Inzwi Hunhu
MaLoudspeaker pamafoni kazhinji haazi makuru anotarisisa, asi kana iwe uri simbe yekusvikira mahedhifoni uye uchingoda ruzha rukuru kubva kumaspika, zviri pachena kuti zvine basa zvakanyanya.
Iyo Galaxy S21 Ultra, zvisinei, yakatiodza moyo nehunhu hwegudzanzwi. Ose maGirazi neiyo iPhone vanoshandisa musanganiswa weyepasi-kupfura 'main' mutauri uyo anoshanda mukonisheni ne 'mubatsiri' mutauri wakavakirwa mukati meyeyezeve. Iyo Galaxy ruzha, zvisinei, inoshaya mumatanho epazasi, chikamu chebass chenziyo chinonzwika zvakadzikama, nepo nzvimbo dzakakwirira dzingave dzichinyanya kubaya uye huwandu hwenzwi hwese hausi izvo zvaunotarisira kubva kune runhare runhare. Iyo iPhone haisi iyo foni ine vakanyanya kutaura zvakanyanya kunze uko (kukudzwa kwacho kunoenda kune Asus ROG Runhare 5 , izvo zvakangonaka zvakanaka kwazvo), asi zvirinani nekudzika kwakawanda uye nehuzhinji hwenzwi, saka kana gudzanzwi remhando rakakosha kwauri, iyo iPhone ndiyo yaunofanirwa kuenda.
Hupenyu hweBhatiri uye Yekuchaja kumhanya
Kukurumidza kuchaja paGirazi
Chekupedzisira, aya maviri anosiyanawo mumabhatiri saizi. Nhare dzeApple senge iyo Galaxy S21 Ultra inogara ichiuya nemabhatiri mahombe pane iPhones, uye iyo S21 Ultra haina kudaro. Iyo & apos; inofungidzirwa kuti iuye ne5000mAh bhatiri sero, ichienzaniswa ne3,687mAh bhatiri pane iyo iPhone. Izvi zvinoreva kuti iyo Galaxy ine inenge 50% yakakura bhatiri kugona pane iyo iPhone!
Mukushandisa chaiko kwepasirese, isu tanga tichienda kuchamhembe kwemaawa manomwe echiratidzu nguva paS21 Ultra, zvishoma zvinonakidza kupfuura iyo iPhone, asi kuti tisimbise izvozvo, isu tinotendeukira kune edu esainzi bhatiri bvunzo!
Webhu Bhurawuza Bvunzo (Wi-Fi, 200 nits kupenya)
Bhurawuza bvunzo 60Hz(maawa) Yakakwirira iri nani Samsung Galaxy S21 Ultra 16h 7 min Apple iPhone 12 Pro Max 14h 6 min
Bhurawuza bvunzo 120Hz(maawa) Yakakwirira iri nani Samsung Galaxy S21 Ultra 14h 43 min
Pamuedzo wedu wakareruka, kubhurawuza pawebhu, iyo S21 Ultra yakaburitsa iyo iPhone kunyangwe payanga ichimhanya pa 120Hz Adaptive rate, inova chiitiko chinoshamisa zvechokwadi. Isu tinonyatso kurudzira kuti inotsetsenura uye inonakidza 120Hz maitiro, kunyanya neakakura hupenyu hwebhatiri, asi kana iwe ukachinjira ku60Hz, uchanyatsopinza zvishoma pamuedzo uyu. Pa60Hz iyo S21 Ultra yakarova kupfuura maawa gumi nematanhatu, iyo-yenguva-rekodhi yemareza!
YouTube vhidhiyo kutenderera(maawa) Yakakwirira iri nani Samsung Galaxy S21 Ultra 8h 52 min Apple iPhone 12 Pro Max 8h 37 min
Yedu yechipiri bvunzo iri kutenderera YouTube mavhidhiyo kubva kune imwecheteyo playlist panguva imwechete, 1080p mhando, uye tarira uye uone, iyo S21 Ultra zvakare inorova iyo iPhone ine diki diki. Yakakura kuratidza iyo Samsung uye bhatiri rayo kusvika zvino.
3D Kubheja Bvunzo
3D Kutamba 60Hz(maawa) Yakakwirira iri nani Samsung Galaxy S21 Ultra 8h 40 min Apple iPhone 12 Pro Max 8h 1 min
3D Mutambo 120Hz(maawa) Yakakwirira iri nani Samsung Galaxy S21 Ultra 5h 3 min
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, isu tine yedu bvunzo bvunzo, uye kana iwe uchitamba mitambo senge Call of Duty uye Minecraft, iyi ndiyo nhamba yekutanga bvunzo iwe yaunofanira kufarira nezvayo. Nepo mimwe bvunzo mbiri dzichitakudza CPU, iyi inokanganisa GPU uye inoratidza mashandiro ayo.
Uye zvakare, iyo Galaxy inoburitsa iyo iPhone neimwe nguva yekumhanya pa60Hz, asi ramba uchifunga kuti kushandisa 120Hz yekutamba kunonyatsorova bhatiri zvakanyanya uye unowana inenge hafu yehupenyu hwebhatiri iwe yaunowana neimwe nzira kungori maawa mashanu e nguva yekutamba pa120Hz. Kana iwe uchida chiyero pakati pekuita uye hupenyu hwebhatiri, zvine musoro chaizvo kumutambo pa60Hz.
Zvekuchaja, iyo iPhone 12 Pro Max inotsigira kumhanya kunosvika 20W, nepo Galaxy S21 Ultra ichitarisirwa kutsigira zvishoma zvishoma, 25W kumhanya kumhanya. Iyo iPhone yaive zvakare yekutanga foni musika kutakura isina charger, uye iyo S21 Ultra ndiyo yekutanga foni yeApple yekutevera iyi nhamo kufamba.
Zvinosuruvarisa, izvo zvinoreva kuti aya maviri epamberi mureza ari kumashure kweiyo nguva yekuchaja. Zvinotora inenge awa nehafu kubhadharisa zvizere iyo S21 Ultra ine 25W charger, uku uchishandisa 18W / 20W charger pane iyo iPhone inotora ingangoita 1 awa nemaminitsi makumi mashanu. Mune nguva apo mafoni anobhadharisa pasi peawa, uye vamwe vanogona kubhadharisa zvizere muhafu yeawa, kumhanya kwacho kwakangoti nonokei.
Nhare dzese dziri mbiri dzinotsigira zvakare kuchaja isina waya kumhanya kusvika pa15W ine charger inoenderana. Iyo iPhone inomira pano netekinoroji yayo nyowani yeMagSafe kuitira kuti foni igone kuita nemagineti uye nekuchengetedzeka kubaya kumachaja uye zvishongedzo, zvishoma makumi mashanu zvekuwedzera zvausingasvike paGirazi.
Izvo izvo iPhone isingakwanise kuita inodzosera isina waya kuchaja, nepo iyo Samsung iine iyi sarudzo kuti iwe ugone kuisa yako Galaxy Buds Pro semuenzaniso uye nekukasira kuzvikwidziridza kumusoro uchishandisa yako Galaxy foni senge isina waya simba bhengi emhando.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, regai & maapos ataure mitengo. Mamiriro ezvinhu emusika gore rino akamanikidza Samsung kudzikisa mitengo yayo yefoni. Muna 2020, Samsung yakaparura mureza wayo S20 Ultra nemutengo wakakwira we $ 1,400, nepo gore rino & apos; s Galaxy S21 Ultra ichitanga pamutengo unonzwisisika kutanga pa $ 1,200, iyo ichiri kudhura zvakanyanya kupfuura iyo iPhone 12 Pro Max.
Pazasi, iwe uchaona iyo MSRP yefoni dzese, asi ramba uchifunga kuti iyo Galaxy inowanzo deredzwa uye inogona kuwanikwa yakaderera se $ 1,000 nepo mutengo wekucheka kweiyo iPhone uri kunetsa kuuya, saka mikana ndeyekuti iwe unogona kuwana yako Galaxy yemutengo wakaderera zvishoma pane iyo iPhone.
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - $ 1,200 yemhando ye128GB, $ 1,250 ye256GB, $ 1,380 ye512GB
Apple iPhone 12 Pro Max - $ 1,100 ye128GB modhi, $ 1,200 ye256GB, $ 1,400 ye512GB
pixel yeGoogle inoita kunge iphone
mafoni ane bhatiri rinobviswa 2015
giya s3 inoenderana ne iphone
Apple iPhone 12 Pro Max ongororo: yakanakisa kamera uye kuratidza pane iyo iPhone
iOS 10 kuburitsa zuva, nguva, uye anokodzera zvishandiso: it & apos; s nhasi! (Gunyana 13)
Sevha $ 2.99! Yakakurumbira Tower Defense mutambo Bloons TD 5 ikozvino yemahara zvachose paApple
Yakanakisa Nhema Chishanu 2021 madhiri kubva kuKutenga Kwakanyanya: zvatinotarisira
Samsung & apos; yakasarudzika Galaxy Z Fold 2 5G inoerekana yatengeswa pamutengo unoshamisa wakaderera
Maitiro ekudzora yako PC uri kure uchishandisa yako smartphone kana piritsi (Android, iOS)
Samsung Galaxy Note 20 5G vs Galaxy S20 + kuenzanisa
Kuchinja kubva ku iPhone kuenda kuApple: matipi uye madiki aunofanirwa kuziva